Kaarka Aqoonsiga oo hada la sameysan karo | Somaliska
Sida aad la socotaan kaarta aqoonsiga ee Iswiidhan ayaysan hada heli karin dadka Soomaalida cusub waayo waxaa shuruuda in aad sugto 6 bilood. Hadaba Sida uu qoray Sveriges Radio shuruudaas ayaa meesha laga saaray hada oo waad sameysan kartaan kaarka aqoonsiga iminka.
Dawladda dalkaan Iswiidhan ayaa maanta go'aamisey in ay bilaabeeyso dhaqangalinta hab cusub oo teesarayaasha aqoonsiga loogu sahlayo dadka soogalootiga ah oo aan markoodii hore wadan waraaqo caddeeynaya qofka uu yahay, sidaas waxaa lagu sheegey war saxaafadeed ay dawladdu soo saartey. Waxa ugu muhiimsan oo arrintaan iska badaley ayaa ah in hay'adda canshuuraha ee Skatteverket-ka oo iyadu qaabilsan bixinta teesarayaasha ay markaan isticmaali doonto macluumaadkii uu qofkaas soogalootiga ahi markiisii hore u sheegtey hay'adda socdaalka si loogu caddeeyo qofka uu yahay loona siiyo teesare aqoonsi u noqda.
Update: Hay'ada Canshuuraha Iswiidhan ayaa noo xaqiijisay in uu go'aankaan cusub dhaqan galayo 1da Oktoobar 2010.
Dawladda dalkaan Iswiidhan ayaa maanta go’aamisey in ay bilaabeeyso dhaqangalinta hab cusub oo teesarayaasha aqoonsiga loogu sahlayo dadka soogalootiga ah oo aan markoodii hore wadan waraaqo caddeeynaya qofka uu yahay, sidaas waxaa lagu sheegey war saxaafadeed ay dawladdu soo saartey.
Waxa ugu muhiimsan oo arrintaan iska badaley ayaa ah in hay’adda canshuuraha ee Skatteverket-ka oo iyadu qaabilsan bixinta teesarayaasha ay markaan isticmaali doonto macluumaadkii uu qofkaas soogalootiga ahi markiisii hore u sheegtey hay’adda socdaalka si loogu caddeeyo qofka uu yahay loona siiyo teesare aqoonsi u noqda.
Update: Hay’ada Canshuuraha Iswiidhan ayaa noo xaqiijisay in uu go’aankaan cusub dhaqan galayo 1da Oktoobar 2010.
c/laahi mohamed ahmed says:
waxaan ahay nin ku nool somlia gaar ahaan puntland waxaan rabaa inaan aado dalka sweden
October 14, 2010 at 19:13
Walaal C/laahi waad ku mahadsantahay qoraalka aad noo reebtay, wadooyinka lagu tago Sweden koley Somalida inteeda badan waa taqaanaa walow ayaamahaan dambe ay adagtahay in qof dacwo lagu soo galinayo.
xasan farax says:
walaal marka hore waan ku salamay salaan kadib waxaan ka codsanaa in aad ii soo fah fahiso qofka aqoonsida laga rabo hadii passporkii somaliya la diiday maxaa kalo xal noqon karo aay dowlada swden aqoonsan tahay
Salaan ka dib, walaal ma jiro wax cadeyn u noqon kara qofkasta Somaliga. xalka kaliya waxa weeye in Sweden ay ka laabato goaanka baasaboorka. Rajada way fiicantahay insha Allah
Jamac cabdi says:
Walal asc, waxan ahey wiil somaliyed oo kusugan kenya waxan rabaa in an iska diibo sweden bug ahaan maxatala ah thank u.